China chisanganiso bhakiti vagadziri uye vanotengesa | Dongheng Machinery
Zvimiro zveedu musanganiswa bhaketi
KINGER chisanganiso bhaketi rine maviri mamodheru ayo akakodzera skid mudhiraivho uye backhoe loader nezvimwewo uye yakanyanya kugona inogona kusvika 300L.
KINGER chisanganiso bhaketi inoshandisa multistage chisimbiso mukutakura nzvimbo kudzivirira kubva kumatope.Nenzira iyi, iyo inotakura yehupenyu ichave yakareba.
Uine hydraulic kuvhura pazasi pechisanganisa bhaketi pamwe neinosvikika yekuburitsa pombi, iwe uchave nyore maxium kutonga pamusoro pega kudururwa.
PFEKAI RESISTANT MATERIAL
Bhaketi uye rinosemesa reza zvinogadzirwa ne-yakasimba-simba yekupfeka-isingagadzirise zvinhu, izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kupfeka panguva yekushanda.
Yakakwira mhando yekudzora mavharuvhu uye emagetsi ekubatanidza makiti mukati anoita KINGER musanganiswa bhaketi rinoratidza mushe mashandiro mukugadzira rakasimba basa.
Kana iyo odha iri pasi pe10pcs, isu tinokwanisa kuendesa zvinhu kuQingdao Port mukati memazuva gumi nemashanu mushure mekugamuchira iyo kubhadhara.Kana anopfuura makumi maviri maopcs, isu tinosvitsa nhumbi mukati memazuva makumi matatu mushure mekugamuchira mubhadharo.Tinogona zvakare kuendesa zvinhu kune yako inodikanwa chiteshi .
Isu taishandisa vhinishi yekubheka uye pendi yepamusoro yakatsetseka pasina peeling. Izvo zvikamu zvakafumurwa zvinorapwa nekudzivirira ngura. Export zvigadzirwa zvakazara mumaplywooden kesi kuona pasina bump, ngura uye zvimwe zviitiko panguva yekufambisa.
Shandisa pfungwa yepasirese yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuderedza kushandiswa kwepurasitiki uye zvimwe zvekutakura zvinhu zvinokuvadza zvakanyanya nharaunda.
Isu takagadzira zvigaro zvekuchera kweanopfuura makore gumi.Zvese zvigadzirwa zvedu zvinowana fomu reEC uye ISO chitupa chakakwirira uye chakatsiga quality.In Mukuwedzera, tinogamuchira OEM.
KINGER Concrete Chisanganiso Bucket kusungirirwa kuri nyore kunotora kunetseka kubva mukugadzira rakasimba basa, iro rinouya mumatanho maviri kuchengetedza nguva yako yebasa nemodhidhi yedu inokwanisa kusanganisa nekutakura kusvika ku300L kongiri mune imwechete mutoro. adapta yeplate yakasungirirwa kuti ikwane chero ma brand skid steer.As kune backhoe loader, tinogona kugadzirwa sehukuru hwako kuti hukwane muchina wako.
Pamusoro pane yedu yekusanganisa bhaketi tsananguro yeako mareferensi.Inogona kukwirwa pane ese skid steer uye backhoe loaders.Yese mibvunzo inogamuchirwa kuti utibata nesu.
Pashure: Chigumburu kuronga
Zvadaro: Earth auger